မျှော်လင့် နေဆဲဘဲ: လိပ်ကျွန်း KOH TAO
လိပ်ကျွန်း KOH TAO
လိပ်ကျွန်း လူသတ်မှုဖြစ်တဲ့ လင်းအားကြီးစမှာ
သူဌေးသားမျက်နှာမှာ သွေးတွေနဲ့တွေ့ တယ်တဲ့ ။
တွေ့ လိုက်တဲ့သူတွေ ကျွန်းပေါ်က
ကြောက်လန့် ပြီး ပြေးကုန်ပြီတဲ့ ။
စာရေးတဲ့ သတ်ပုံကို ကြည့်ရင်
၆ တန်း ပညာရေး သာသာရှိပေမဲ့
မျိုးချစ်စိတ် ရှိတာကို လေးစားပါတယ် ။
ထိုင်းပညာတတ်တွေ ကြောက်နေရတဲ့ အမှုဆိုတော့
ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေ ကြောက်တာတော့
မြင်လိုက်တဲ့ သူတို့ ကို ဝိုင်းရှာကြပြီး
နာမည် မဖေါ်ဘဲ အချက်အလက်တွေ
မတ်စိက ပေးပါ ။
( မျိုးချစ် မြန်မာပြည်သား )
30 October 2014 ·
ကျွန်တော်တို့ မျိုးချစ် အုပ်စုတွေ အားလုံးက အိပ်စိုက်ပြီး မြန်မာပြည်သားများ ဂုဏ်သိက္ခာ အတွက် လုပ်ပေးနေကြတာပါ ။ တကယ်လူသတ်သမားကို သိတဲ့သူတွေအတွက် စနစ်တကျ စီစဉ်ပြီး မြန်မာသံရုံး မြန်မာအစိုးရ နဲ့ ပါ တိုင်ပင်ရမဲ့ ကိစ္စဖြစ်ပါတယ် ။ တဆက်ထဲမှာ ထိုင်းအစိုးရက လဲ ဆုကြေးပေးမယ်ဆိုပြီး ထောင်ဖမ်းထားတာလဲ ရှိပါသေးတယ် ။ ဒီကိစ္စတွေက သာမာန်အရပ်သားတွေ ဝင်ရောက် စွပ်ဖက်လို့ မရတဲ့ ကိစ္စတွေ ဖြစ်ပါတယ် ။
29 October 2014 ·
CSILA အုပ်စုဖက်က သဘောတူလာပါပြီ ။
သေဆုံးသူ ဟန်နာ ဓါတ်ပုံကို ချဲ့ ပြီး လေ့လာတဲ့ အခါမှာ
လက်မောင်းရင်း မှာ အညိုမဲ လက်ရာတွေ
ပုံပါအတိုင်း တွေ့ နေရပါတယ် ။
မြန်မာလေး ၂ ယောက် ဝန်ခံ ခဲ့သလို
အိပ်နေတာကို ထုတာ မဟုတ်နိုင်ပါဖူး ။
တနေရာရာက လူ ၂ ယောက် လက်မောင်းက
မတ်တတ်ရပ် ဖြစ်စေ ။
ထိုင်ရက်ဖြစ်စေ ထုထားတာပါ ။
ရင်ဘတ်က ခြောက်နေတဲ့သွေးတွေသက်သေပါ ။
ပင်လယ်ရေ တက်တော့ ရင်ဘတ်က သွေးတွေကို
ဆေးချသလို ဖြစ်သွားတာပါ ။
Hanna has been dragged by carry ! look at her arms and armpit
Surely dna of culprits or fingers printed will appear present on dust,
Why police do not search for dna in the dust fingers printed ???,
and she was attacked while standing or sitting see her blood on chest.
The dust is of dry mud from land or ground, not from the sand beach
Guys who carried her is gardening or does some thing with mud
No time to clean hands.
Notaperson who is playing guitar or drinking beer
OMG !! เธอถูกหิ้วปีกมาอำพรางศพที่จุดนี้ สังเกตุรอยมือดำ ๆ ที่รักแร้เธอ
และยังถูกทำร้ายในท่านั่ง หรือ ยืน สังเกตุรอยเลือดที่ไหลลงใต้คอ หน้าอกเธอ
แน่นอน เศษฝุ่นดินร่างกาย ฮันนาห์ ต้องเปื้อน dna ลายนิ้วมือ ของคนร้ายด้วย
ทำไมตำรวจมุ่งไปตรวจแค่ dha ในช่องในคลอดเธอเพียงอย่างเดียว
24 October 2014 ·
ထိုင်းနိုင်ငံက ရိုတီသမား အန္တာရယ် ။
မြို့ နယ်အဆင့် ရဲစခန်းတွေ အားလုံးမှာ
ရိုတီ ကုလားတွေ မွေးထားတာ
အနှစ် ၃၀ လောက် တောင် ရှိပြီထင်တယ် ။
အားလုံးလိုလိုက ရခိုင်တောင်ကို ကျော်လာကြတာပါ ။
အရင်ကတော့ ရိုတီတွေ ထိုင်းရဲကို ပိုက်ဆံပေး
လူဝင်မှုကို ပိုက်ဆံပေးပြီး နေကြတာပါ . ။
သူတို့ အချင်းချင်း ဈေးရောင်းနယ်မြေ လုကြရင်း
ထိုင်းပုလိပ် သတင်းပေး ဘဝ ရောက်ကုန်ကြတယ် ။
၁၉၉၀ ကျော် ကာလက စပြီး
ရိုတီ ကုလား သတင်းပေးလို့ 
မြန်မာကျောင်းသားတွေ အလုပ်က ထွက်ပြေးရ
တောက်ရှောက်ကို အန္တရာယ်ပေးလာတဲ့ လူတွေဗျာ ။
ဒီရိုတီ သမားတွေ ထိုင်းမှာ ချမ်းသာလာရင်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ပြန်မရ တဲ့အတူတူ
မြန်မာကျောင်းသားတွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရက
အနှစ် ၂၀ လောက် ရန်ဖြစ် ဖက်
ငွေပေးပြီး ခိုလှုံ ချမ်းသာ ကုန်တာပေါ့ ။
ထိုင်းပုလိပ် နဲ့ ပေါင်းပြီး ရိုတီသမား ဖြစ်တယ် ။
မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ် လာတယ် ။
သူတို့ တတွေလည်း ခေတ်မှီတယ် ။
သူတို့ အားလုံး မြန်မာ ပတ်စပို့ကိုင်ထားကြတယ် ။
ထိုင်းနယ်မြေထဲက အလုပ်သမားလို ရင်
မြန်မာပြည်က ကုလားပွဲစားတွေနဲ့ 
လူမှောင်ခို လုပ်တယ် ။
မလေးကို လူသွင်းတယ် ။
ဖေါက်ခွဲမဲ့ သတင်းရရင် ထိုင်း၇ဲကို သတင်းပေးတယ် ။
တရားမဝင် နေထိုင်တဲ့ မြန်မာတွေ ဆီက ငွေကောက်ပြီး
ထိုင်းရဲကို ဆက်ကြေးပေးရတယ် ။
ငွေကို ရေ လို ဖြုန်းနိုင်တယ် ။
အခု ဒီလို ကောင်တွေကြောင့်
မြန်မာပြည်သား ကလေး ၂ ယောက်
ကမ္ဘာသိ တဲ့ ပြသနာ ဖြစ်နေပြီ ။
လူမသိ သူမသိ သေးတဲ့ ပြသနာတွေ
အများကြီး ရှိနေသေးတယ် ။
မြန်မာပြည်မှာ ပြည်ပကုလားတွေနဲ့ 
ပေါင်းပြီး လည်း ခြိမ်းခြောက်ခံနေရတယ် ။
ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနူ မဲလိုချင်လို့ 
အာဘွား လုပ်ထားတဲ့ လူမျိုးစု ဆိုပါလား ။
မြန်မာအစိုးရ ရှင်းပေါ့ ။
မျိုးချစ်တွေကို လူမိုင်ငှားရင်
မလိုက်ကြနဲ့။
မကျေနပ်နဲ့စီးပွားရေး
လူမှုရေး မပတ်သက်ကြနဲ့။
မဆက်ဆံကြနဲ့။
ထိုင်းနိုင်ငံက ရိုတီကုလားတွေ နေရာမှာ
ထိုင်းဘာသာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ 
အစားထိုး နေရာယူဖို့အချိန်ရောက်ပြီ ။
24 October 2014 · Edited ·
ဘယ်လို စတင် ဆောင်ရွတ်ခဲ့တယ် ။
( Sein Htay Sun ·
MWRN ကို အသလွတ်ပုတ်ခတ်စော်ကားခံရတာကေ၇ာ
အလုပ်သမားအဖွဲ့ပါ.. NGO မဟုတ်ပါဘူး။ ။
ပို့ လိုက်တာ သေချာအောင်
သူဌေးညီက ဓါတ်ပုံ ရိုက်ယူထားတယ် ။
ဒီ ၂ ယောက်က အာရှ တိုင်သား
ထိုင်းလူမျိုး လား မြန်မာပြည်သားလား ။
Idea from ထက်သူရိန် မင်းထွန်း
— with ထက်သူရိန် မင်း ထွန်း.
မြန်မာ အလုပ်သမားတွေကို လူသတ်သမားအဖြစ်
ထိုင်းပုလိပ်တွေ လုပ်ကြံလိုက်တဲ့ အချိန်က စပြီး
ကျွန်တော့ ဖေ့ဘုတ်မှာ လာဖတ်တဲ့ သူတွေ
တနေ့ တခြား များလာတာကို တွေ့ ရပါတယ် ။
သူငယ်ချင်း ၁၆၀၀ ကျော် လောက်ကနေပြီး
၅ ထောင် နီးပါး ၁၀ ရက် အတွင်း တက်သွားခဲ့ပါတယ် ။
ဒီနေ့ထပ်ပြီး လက်ခံ လိုက်ရင် ၅၀၀၀ ပြည့်တော့မှာပါ ။
လာရောက် ဖတ်ရှု့ သူပေါင်း
တိုင်းပြည်ချစ်တဲ့သူ ၁ သောင်းကျော် ရှိနေတာ
အံ့သြ ဂုဏ်ယူ စွာ ဖြင်နေရပါတယ် ။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ခရိုင်ပေါင်း ၇၂ ခုဝန်းကျင် ရှိပါတယ်
မြန်မာပြည်သားတွေ မိမိတို့အစုလိုက် အုပ်စုလေးများ ဖွဲ့ ထားကြပါ ။
အုပ်စု ခေါင်းဆောင် ။ ခရိုင်ခေါင်းဆောင် ဆိုပြီး ၂ မျိုး ခွဲနိူင်ပါတယ် ။
ကို့ ထမင်း ကို စားပြီး လူမုန်းခံ တဲ့ အလုပ်ဖြစ်လို့ 
လုပ်မဲ့ သူတွေ သေသေချာချာ စဉ်းစားပါ ။
ထင်ပေါ် ကြော်ကြား နာမည်ကြီး ဖို့ လောက်နဲ့မလုပ်ပါနဲ့။
ထိုင်းစကား ကို မေးထူး ခေါ်ပြော တတ်ဖို့ လိုပါတယ် ။
အင်္ဂလိပ်စကား အခြေခံ ရှိဖို့ လိုပါတယ် ။
အချို့တိုင်းရင်းသား အုပ်စုများအတွက်က
မိမိတို့ တိုင်းရင်းသား စကားနဲ့ထိုင်းစကား
အခြေခံရှိဖို့ လိုပါတယ် ။
လိုအပ်တွေကို ကျွန်တော့် ဖေ့ဘုတ်မှာ
လာရောက် ဆက်သွယ် အကြံဥာဏ် တောင်းနိုင်ပါတယ် ။
မြန်မာပြည်ထဲမှာလည်း အစိုးရနဲ့စိတ်ဝင်စားသူများ
ပူးပေါင်းပြီး ထိထိရောက်ရောက် အကူပေးနိုင်မဲ့
အဖွဲ့ တွေ ထူထောင်ပေးသင့်ပါတယ် ။
နေထိုင်ခွင့် မရှိလို့ထိုင်းလူဝင်မှုက ဖမ်းပြီး
နယ်စပ်ပို့။ နယ်စပ်မှာ လူမှောင်ခိုက ငွေပေးပြီး
ထိုင်းနိုင်ငံကို အလုပ်သမား အဖြစ် ပြန်သွင်း တာကို
တားဆီးနိုင်ဖို့ လိုပါတယ် ။
လက်ရှိ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားတွေက
အာမခံပြီး သွားရောက် လုပ်ကိုင်တဲ့ စနစ် ကျင့်သုံးသင့်ပတယ် ။
ကျွ်တော့် အတွေ့ အကြုံ အရ ပွဲစားတွေ ကတိပေးပြီး
အလုပ်ရှင်တွေ ဖက်က ပျက်ကွက်တာ အကြိမ်ပေါင်းများစွာပါဘဲ ။
ဒီပြသနာကို ရှင်းဖို့ လိုပါတယ် ။
. ဖေ့ဘုတ် အကောင့်လုပ်ထားပြီး မသုံးတော့တဲ့
အကောင့်တွေ စစ်ဆေးဖို့လိုလာပါပြီ ။
လူတိုင်း မိမိ အကောင့် တွေကို
ကာတွန်း ပုံလည်း တပုံလောက် တင်ထားစေချင်ပါတယ် ။
နောက်ထက် ၇ ရက် လောက်ဆိုရင်
အကောင့် တွေကို စစ်ဆေးပြီး
မသုံးတဲ့ အကောင့်တွေကို အန်ထုတ်မယ်လို့စဉ်းထားပါတယ် ။
Good News! - သတင်းကောင်းပါ။ ဗြိတိန်စုံထောက် တွေစစ်ဆေးခွင့်ရပါပြီ။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်တွေ့ဆုံပြီးဗြိတိန်ရဲတွေအတူ
အင်္ဂလန် ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးသို့ထိုင်းလူသတ်သမားများကို စစ်ဆေးရန်
လွပ်လပ်စွာ စုံစမ်းရေး အတွက် မြန်မာပြည်သား ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ 
လက်မှတ်ပေါင်း ၁ သိန်း နဲ့၁၇-အောက်တိုဘာ ၂၀၁၄
သွားရောက် ပေးအပ်နေစဉ် ။
Burmese activists handing petition with 100,000 signatures ...
ဒို့ အောင်ပွဲ ။
အသတ်ခံရသူ ဒဏ်ရာများ လေ့လာခြင်း ။
ဒေးဗစ် နဲ့ဟန်နာ ၂ဦး တွင် ရှိနေသော
ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက် ပုံသဏ္ဏန် အားဖြင့် မတူညီပါ ။
တိုက်ခိုက်ခဲ့လျှင် ဘယ်သန် သမား ဖြစ်မည် ။
လူတစုက ခြေတွေ လက်တွေ ချုပ်ပေးပြီး
ခေါင်းပေါ်က ကျော်ထိုးလျှင် ညာသန်ဖြစ်မည် ။
မူးမူး နဲ့ချု ပ်ထားကြပြီး ထိုးတယ် ဆိုလျှင်
အခြားလူတွေမှာလည်း ဒဏ်ရာ အသီးသီး ရမှာဖြစ်ပါတယ် ။
ကျွန်းပေါ်က မြန်မာတွေ သတိထား မိသူ တွေ့ ရှိလား ။
ဒီနေရာမှာ ဘာကြောင့် လဲ ဆိုတာက
ယနေ့ တိုင် အဖြေမရသေးပါ ။
ဟန်နာ၏ ၏ ဒဏ်ရာများက
သေဆုံးသည့် လက်နက် အမျိုးအစားကို
မသိစေရန် ပေါက်ပြားနှင့် ဖျက်ဆီးသည်ဟု ယူဆသည် ။
လက်နက် အမျိုးအစား မသိစေရန်
သေဆုံးသည့် ဒဏ်ရာ ဘာကြောင့် မသိစေချင်တာလဲ ။
နုံမ်(သူဌေးသား) က ဟန်နာကြိုက်တာ ဖြစ်နိုင်ပါသည် ။
ဒီအတွက် ပြသနာ တက်နိုင်တာကို လက်ခံပါသည် ။
ဟန်နာ နှင့် ဒေးဗစ် ရည်းစား ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါ ။
ဒေးဗစ်ရည်းစားက အင်္ဂလန်မှာ ကျန်ခဲ့ပါသည် ။
ဒေးဗစ်က သဝန်တိုတာ လည်း မဖြစ်နိုင်ပါ ။
ထက်သူရိန် မင်း ထွန်း ပြောတဲ့ ပြေးလမ်းထဲက လူက
ဒီ ပဠေလိ လူသတ်မှုမှာ အားလုံး ပါဝင်နေပါသည် ။
လူသတ်မှုဖြစ်တဲ့ အချိန် လိပ်ကျွန်းမှာ ရှိနေတဲ့ သူဌေးသားက
ဘာကြောင့် မရှိပါဖူးဆိုပြီး ဘန်ကောက်မှာ မီဒီယာနဲ့ရှင်းလင်းတာလဲ ။
ဟန်နာကို ကျီဆယ်ရင်း သေဆုံးတာ မဖြစ်နိုင်ဖူးလား ။
သူ့ အသက်အရွယ် ကိုယ်ခန္တာ နဲ့ဒေးဗစ်ကို မယှဉ်နိုင်ရင်
ဘယ်သူတွေ ကူညီကြမလဲ ။
ဟန်နာ အော်သံကြားလို့ဒေးဗစ်က ကူညီဖို့ အသွား
စောင့်နေတဲ့ သူတွေက ဒေးဗစ်ကို ဝိုင်းသတ်တာတော့
အများကြီး ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
ဒါမှ မဟုတ် ဟန်နာနဲ့ဒေးဗစ် တနေရာစီက
ဒဏ်ရာတွေ ရ လာလို့ပင်လယ်ထဲ ပစ်ချဖို့ 
သယ်ကြရင်း လူ ၂စု တွေ့ ပြီး
အကြံတူ ပုံဖေါ်ကြတာလား ။
ဒါဆိုရင် ဟန်နာ နဲ့သူဌေးသား ချစ်ကြိုက်နေတယ် ဆိုတဲ့
သတင်းက မှားလား မှန်လား ။
ဒီအမှုကြီးကို လက်စ လက်န ဖျောက်
တရားခံကို လွဲချဖို့ချက်ခြင်း စဉ်းစားနိုင်တာ
သူဌေးညီ နဲ့သူဌေး တယောက်ယောက် ဘဲ ဖြစ်နိုင်တယ် ။
တခြား ဘယ်သူ ဖြစ်နိုင်သေးလဲ ။
ပုလိပ်ကတော့ ငွေရမှာ သေချာလို့ 
အလောင်း စတွေ့ ကထဲက
သက်သေခံတွေ အားလုံး စနစ်တကျ မလုပ်ခဲ့ဖူး ။
နောက်ဆုံး မြန်မာတွေကို အစားထိုးတယ် ။
နိုင်ငံတကာ နဲ့ရှင်းရတော့မှာပါ ။
ကူညီပြီး စဉ်းစားဖို့ ပါ ။
စကားနိုင်လုဖို့ မဟုတ်ပါ ။
သေဆုံးသူ ဟန်နာ နှင့် ဒေးဗစ် မိဘများ ။
မိဘများနှင့် ကျန်ရစ်သူ ဆွေးမျိုးသားခြင်းများကဲ့သို့ 
မြန်မာပြည်သားများလည်း ကြေကွဲဝမ်းနည်း နေကြပါတယ် ။
သေဆုံးသူများ ကို မြန်မာအလုပ်သမားက သတ်တယ်လို့ 
ထိုင်းပုလိပ်များက စွပ်စွဲထားသည်ကို အထင်မလွဲစေလိုပါ ။
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ မြန်မာ အလုပ်သမားများသည်
အလုပ်ရှင် ထိုင်းလုမျိုးများ၏ ထားရာနေ စေရာသွား
ခိုင်းတာ လုပ်ရသည့် ကျွန်အဆင့်သာရှိပါသည် ။
မြန်မာအလုပ်သမားများ လူမသိ လူမသိဘဲ
ထိုင်းနိုင်ငံ နေရာ အနှံ့ အပြားတွင် သေဆုံးနေကြသည်မှာ
နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်လာပြီ ဖြစ်ပါသည် ။
ယခု လူသတ်မှုတွင် မြန်မာပြည်သား အားလုံးက
အစားထိုးဆိပ် အဖြစ် အသုံးချခ့ရသည်ကို
သိရှိသောကြောင့် အမှု မှန် ပေါ်ပေါက်လာရေး အတွက်
လူတိုင်း တတ်နိုင်သည့် ဖက်မှ ကြိုးစားနေကြပါသည် ။
ယနေ့ အချိန်တွင် ထိုင်းလူမျိုးများကလည်း
ထိုင်းပုလိပ်များ၏ မှားယွင်းသော လုပ်ကိုင်မှုများကို
သံသယ များဝင်ပြီး အငြင်းအခုံ ဖြစ်နေကြပါသည် ။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် မပြောရဲကြသော မျက်မြင်သက်သေ မြန်မာ များနဲ့ 
စုံစမ်းရန် အလှမ်း မမှီသော သူများကို တင်ပြလိုပါသည် ။
ဟန်နာ အသတ်မခံရခင် ၂ ရက်လောက်မှာ အေစီဘား သူဌေးသားက ကြိုက်ပြီး နောက်က တကောက်ကောက်လိုက်နေတာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ မြန်မာတွေ မြင်တွေ့ ခဲ့ရတယ် ။
ရှောင်နဲ့အေစီဘား သူဌေးသား ဟာ တပူးတွဲတွဲ နဲ့နီးကပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းများ ဖြစ်ကြတယ်
အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့ ည ၁၂ နာရီ အထိ အေစီ သူဌေးသား နဲ့ ရှောင် ဘီယာ အတူတူ သောက်တယ် လို့အချို့မြန်မာ အလုပ်သမားတွေ မြင်ခဲ့ရတယ် ။
ထို့ အတူ နောက်ဆုံး ညက အတူ သွားခဲ့သော TOM ကိုလည်း မည်သူမျှ စုံစမ်းမရပါ ။
သင်တို့မိသားစုများ ကြေကွဲ သကဲ့သို့ 
မြန်မာပြည်သားများ လည်း ကြေကွဲနေကြပါတယ် ။
ဒီအမှု အတွက် အမှန်အတိုင်း အမြန်ပေါ်ပေါက် စေရန်
ဘုရားရှင် လမ်းပြတော်မူပါ ။
သင်တို့ မိသားစုများ အပေါ် ဘုရားရှင် ကောင်းချီးပေးတော်မူပါ ။
Dear Parents and relatives of Hanna and David,
We,the whole Burma, are in suchaGreat Grief for your lost.
Please do not jump into conclusion that it was2Burmese who did killed them as Thailand police think.
Burmese who are working as migrant ones in Thailand are just likeaSlaves to their employer.
Some of Burmese workers are killed in somewhere unknown throughout the country,Thailand since 20 years ago.
We,Burmese are trying to reveal the TRUTH as we are sure that these2Burmese are used as scapegoat.
In these days, Thai people also getting suspect the Thai polices the way they handle the case.
In Thailand, there are Burmese witnesses who dare not speak up and there are things that out of reach of Investigation such as :
Before2days Hanna was killed, some of Burmese workers have seen that Son of AC Bar was following her showing he likes her.
He ( Son of AC Bar ) and Sean are quite close friends.
At the same day Hanna was killed, they were drinking Beer together till 12 am, some Burmese workers have seen it.
and Nobody knows who is TOM,the guy who is with them at the same night.
we,Burmese are feeling so sorry for suchatragedy as you are feeling right now.
May God help us to reveal the TRUTH.
May God bless you on your family.
Min Din ·
Ko Htay Tint ကိုဌေးတင်ရေ။ မနေ့က ခရီးလွန်နေလို့ပါ။
တကယ်တမ်းတော့ ထိုင်းနိုင်ငံကို မြန်မာတွေစရောက်တာ ပျူခေတ်ကတည်းကလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ပျူခေတ်တုန်းက ဖူးခက်ကျွန်းမှာ အကောက်ခွန်အရာရှိရုံး ဖွင့်ခဲ့တယ်လို့ ကောလင်းမက်ကေရဲ့ ဖူးခက်သမိုင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ တောင်ဖက်ပင်လယ်ထွက်ပေါက် အကောက်ခွန်ဂိတ်ပေါ့။ နောက်ပိုင်း ပုဂံခေတ်ကစလို့ အားကြီးတဲ့မြန်မာမင်းမှန်သမျှ ထိုင်းကို သိမ်းယူခဲ့တာချည်းပါပဲ။ ကျနော်ဆိုလိုတဲ့ အနှစ်လေးဆယ်ဟာ မြန်မာတွေအလုပ်သမားဘဝနဲ့ ညိုးညိုးငယ်ငယ်ရောက်ရှိလာရသော ဘဝများရဲ့ ကာလအပိုင်းအခြားကို ဆိုလိုပါတယ်။ တိတိကျကျပြောရရင် သန်းချီပြီး သူတပါးခိုင်းဖတ်ဘဝနဲ့ ရောက်ရတာ မြန်မာစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့လက်ထက်က စတင်ခဲ့တာပါပဲ။
(အင်္ဂလိပ်လို ပြန်ပြီး မနက်ဖြန်ကျ ပေးပေးကြပါ )
လိုအပ်တာများ ပြင်ဆင်လိုသည်များ ရှိလျှင် ပြင်ဆင်နိူုင်ပါသည် .
ဒီလူသတ်မှုတွေမှာ ပါဝင် သူတွေအားလုံး
ကိုယ်လွတ်ရုံး ပြီး လိမ်နေကြတဲ့ စကားတွေ ဖြစ်လို့ 
အမှုက ပိုမို ရှုပ်ထွေး သွားတာ ဖြစ်မယ် ။
ကောက်ချက် ချမိတယ် ။
မြန်မာတွေ ကို သတ်တယ် လို့မဖမ်းခင်က သတင်းတခုမှာ
ဟန်နာကို ထိုင်း၂ ယောက် မုဒိန်းကျင့်နေတာ မြင်တယ်လို့ 
ဥရောပ နိုင်ငံသား လင်မယား ဖေ့ဘုတ်မှာ ဖတ်လိုက်ရတယ် ။
အသတ်ခံတာ သေနေတာ တွေ့ တဲ့ နေရာလား ။
၂ ယောက် စလုံး အတူတူ ပူးတွဲ အသတ်ခံရတာလား ။
ဘာလက်နက်တွေ နဲ့သေကြတာလဲ ။
မသေခင်က ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့လဲ ။
အခုပုံတွေထဲက အချိန်တွေ အရဆိုရင်
ရှောင် ကို သတ်ဖို့လိုက်ကြတာလား ။
အလောင်းတွေကို အထားအသို ပျက် မပျက် သွားကြည့်တာလား ။
သူဌေးသား လား ။
ထားရာနေ စေရာသွား ခိုင်းတာလုပ်
သူတို့ နဲ့မဆိုင်တာ သေချာတယ် ။
CSILA သုံးသပ်ချက်အရ ရှောင် လူသတ်သမားတွေကို
ကြောက်ပြီး ပြေးပုန်းရတယ် ဆိုတာ
မဖြစ်နိုင်ဖူး ။ သူလိမ်တာပါတဲ့ ။
อยากทราบว่าภาพนี้ถูกถ่ายวันไหน? เวลาไหน ทำไมเราไม่เห็นเวลาจากกล้อง CCTV ทำไมเจ้าของร้านสะดวกซื้อต้องโกหกกับ Thai PBS ด้วยว่านายฉอนไม่ได้มีลักษณะหวาดกลัว ทั้งที่จริงเเล้วเขากลัวจนตัวสั่น จากรุปที่ DARK KNIGHT ส่งมา
When this picture was taken? There was no time stamp on the CCTV. The convenient store owner told Thai PBS news reporter that Sean wasn't appear to be afraid that night. He was lying because my Facebook friend name "DARK KNIGHT" sent me the picture you see on the left.
15 October 2014 · Edited ·
ခါးတောင်ကျိုက် ပြေးတာ ။
ဖါးခမတ် လား ။
(ပုဆိုး တဝက် လောက်ရှိပြီး ပတ်လည်ကွင်း မဆက်ထားဖူး )
ထိုင်းချည်ဘောင်းဘီတို အပြေးမြန်ရင် ဖြစ်တယ် )
စပြေးတာ နံက် ၅ နာရီ နီးနီး
ပြန်ဝင်လာတ နံက် ၆ နာရီ နီးနီး
နေထွက် ခါနီး နံက် ၅း၄၁;၅၀ မှာ ဆိုတော့
သတ်ထားတဲ့ အလောင်းတွေ ဖျောက်တာ
ပိရိမှု ရှိ မရှိ သွားကြည့်တာ ဖြစ်နိူင်တယ် ။
မူလ သံသယ မောင်မောင်က မြန်မာပြည် ပြန်ပြီ ။
မြန်မာပြည်ကအဖွဲ့ တွေ သွားရောက်အားပေးကြပါ
— with Bdc Burma and Ohn Mar Oo.
လက်ရှိ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပြသနာတွေက
ဝန်ထမ်းတွေ အချင်းချင်း ယုံကြည်တယ်
လူထုက ပြသနာတွေ တောက်လျှောက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ် ။
နမူနာ အနေနဲ့ 
အမေရိကန် ဗီယက်နာမ်ကို ထိုးစစ်ဆင်တုံးကပေါ့ ။
ဗီယက်နာမ်မှာ အမေရိကန်တွေ ဘာဖြစ်နေတယ် ဆိုတာ
ဝါဒဖြန့် ချီရေး သတင်းဘဲ သိရတယ် ။
အမေရိကန် အစိုးရ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌါန နဲ့ပင်တာဂွန်
အဖြစ်မှန်သိပြီး လူထုက အမေရိကန် အစိုးရကို
ဆန္ဒပြပြီး တောင်းဆိုကြရတယ် ။
DNA နမူနာ ယူတုံးက သက်သေအဖြစ် ရှေ့ နေ ရှိလား ။
ယုံကြည်ရတဲ့ တခြား အဖွဲ့ အစည်း ဘယ်သူရှိလဲ ။
ဘယ်သူမှ မရှိဖူး ။ ဌါန ဆိုင်ရာ အချင်းချင်း ယိုင်းပင်းကြတာ ။
DNA စစ်ဆေးတာ လူစားထိုးနိုင်လား ။ ထိုးနိုင်တယ် ။
ဒီလို အခြေအနေတွေကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်း
တလ အတွင်း ၁၉ % စပြီးကျဆင်း လာနေပြီ ။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ နိူင်ငံခြားသား ခရီးသွားတွေ သန်းနဲ့ ချီ ရှိတယ် ။
အလုခံ မုဒိန်းအကျင့်ခံ အသတ်ခံရတာတွေ အများကြီး ဖြစ်ခဲ့တယ် ။
ဒီ လိပ်ကျွန်း လူသတ်မှု ကတော့
ထိုင်းပုလိပ်ကို ဝန်ကြီးချုပ် ကာကွယ်ပေးနေမယ် ဆိုရင်
ထိုင်းအမျိုးသား ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်နေပြီ လို့ သတိပေးလိုက်တယ် ။
(ရှပ်ဝါတွေကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံ ဂုဏ်သိက္ခာ အတွက်
လိုအပ်လာရင် တခုခု လုပ်ဖို့ စဉ်းစားနေကြပြီ )
ရှပ်ဝါ ခေါင်းဆောင်ဟောင်း ပြောကြား ချက်
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က စစ်တပ်က လာတာ လက်ခံတယ် ။
စစ်တပ်ထဲက အတွေးအခေါ်တွေ ထုတ်ပစ်ဖို့ လိုတယ် ။
အစိုးရသစ် လက်ထက်မှာ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေ ကို
ပြောင်းလဲနေတာ မှန်တယ် ။
ပုလိပ်တပ်ဖွဲ့ ကို ဘာမှ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး မလုပ်ရသေးဖူး ။
ဝန်ကြီးချုပ် တာဝန်ယူထားတဲ့ အတွက်
လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ တွေ မစဉ်းစားဘဲ
ထိုင်းလူထု ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်ပါ စဉ်းစားပေးရမယ် ။
ထိုင်းလူထု တရပ်လုံး သိနေကြတယ် ။
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ပုလိပ်တွေကို ကာကွယ်ပေးမဲ့အစား
လုပ်သင့်တာ ဘယ်သူ့ သားသတ်တာ ။
ဘယ်သူတွေ က ကာကွယ်ပေးထားတလဲ ။
ဥပဒေ အရ ဘယ်သူတွေ မှားတာလဲ ဆိုပြီး
ဝန်ကြီးချုပ် ကိုယ်တိုင် ဂုတ်ဆွဲပြီး
နိုင်ငံတကာက ပြန်လည် ယုံကြည်လာတော့မှာပါ ။
ပွိုင့် ၂၂ (.22 ) သေနပ်
ကျည်ဆန် မှာ ဘာဖြစ်လို့ 
ထိပ်တုံး လုပ်တာလဲ ။
အနီးကပ် ရန်မူ လာသူကို
တုန်း ကနဲ လဲကျသွားအောင်
ငယ်ငယ် မုဆိုးလုပ်ဖူးတုံးက 303 ရိုင်ဖယ်ကျည်ကို
ထိပ်ကနေပြီး ကန့် လန့် ဖြတ်
သံဖြတ်လွှ နဲ့လေးစိတ် စိတ်ထားတယ် ။
ထိ လိုက်တဲ့ သားကောင် ပွင့်ထွက်သွားတယ် ။
လိုက်ရှာစရာ မလိုတော့ဖူး ။
လိပ်ကျွန်းပေါ် မှာ ဒီသေနတ်တွေ ရှိတယ် ။
လိပ်ကျွန်းပေါ်က CCTV ကင်မရာပုံထဲက
ဆိုင်ကယ်စီးနေတဲ့ ၃ ယောက်ထဲက
မောင်မောင် ဆိုတဲ့ တယောက်ပါ ။
ထိုင်းကပုလိပ်က ဖမ်းဆီးသွားပြီး ၂ ယောက်က
ထုတာနဲ့ကြောက်လန့် ပြီး ဝန်ခံထားလို့ 
အမှုက တရားရုံး တက်သွားပါပြီ ။
ကျန်တဲ့ ၂ ယောက် ကတော့
ဂစ်တာတီး တာ အသံကြားလို့ 
အချုပ်ခန်းထဲ ရောက်ပြီး ပြန်ထွက်လာတာပါ ။
ထိုင်းပုလိပ်တွေ မြန်မာတွေအပေါ် ထားတဲ့ အမြင်
တိုက်ညီလက်ညီ နဲ့တော်လှန်ရေး ဆက်လုပ်ရမယ် ။
ဘယ်ဘက်မြင့်မြင့်က the offices at central world, ရှေ့နား နိမ့်နိမ့်က Zen
လိပ်ကျွန်း သူဌေးသား နေတဲ့ နေတာ
ယုတ်မာတဲ့ သူဌေးသားနဲ့ 
အပေါင်းအပါ တွေကို သတိထားဖို့ပါ
စုံစမ်း စစ်ဆေးပေးပါ ။
The Nomad Offices, ZEN @ Central World
Level 12, ZEN World, ZEN Department Store at Central World
คุณคือ CSI LA က လိပ်ကျွန်း သူဌေးသား နဲ့ အဖွဲ့ ကို
CCTV ကင်မရာတွေက ပုံတွေ နဲ့ 
ထပ်ပြီး ခြောက်ထုတ် နေတယ် ။
လိပ်ကျွန်းသူဌေးက ပုလိပ်နဲ့ ပေါင်းပြီး
CCTV ကင်မရာ တွေ့ ရှိချက်တွေနဲ့ 
မြန်မာတွေ ဖက်ကို လှည့်ပေးပြီး
သူ့ သားနေတဲ့ ဘန်ကောက်က CCTV တွေကို
သြဇာ မသက်ရောက်တာလား ။
လိပ်ကျွန်းတော့ ပိုင်မယ် ။
ဘန်ကောက် ပိုဖို့တော်တော်ခက်မယ် ။
နံပါတ် ၅ ကို စစ်ဆေးပေးကြပါ ။
มาช่วยกันวิเคราะห์มุมของกล้องตัวที่5กันครับ เพื่อนเห็นอะไรกันบ้าง?
You're CSI LA
Let's help me analyze the cam number 5. What do you see?
လိပ်ကျွန်း သူဌေးသား နဲ့ အဖွဲ့ က
ဘန်ကောက်မှ ရှိနေပါတယ်ဆိုတာ ကို
သက်သေ အထောက်အထားနဲ့ပြတာ
ကင်မရာ တပ်ထားတဲ့ နေရာ
မီးရောင် အရိပ် ။
ပန်းယားအွန် ( ဦးနှောက်နည်းသူတွေ )
ဦးနှောက် တခြမ်း ရှီသူတွေ ဘယ်သူပါလိမ့်။
ပုံပါအတိုင်း နေရာရွေ့ သွားတာ ၃ စက္ကန့် 
Blackout nested Milk usually walk3steps per second is possible for
him to walk like this
เอาภาพมาซ้อนกัน นมสดปรกติเดิน3ก้าวต่อวินาที เป็นไปได้ ที่เขาจะเดินได้เเบบนี้.
ထိုင်းပုလိပ် တွေက တရားဝင် စစ်ဆေးနေတယ် ။
ထိုင်းမီဒီယာတွေကလည်း စုံစမ်းကြတယ် ။
သူတို့ ထင်မြင်ချက်တွေ သတင်းစာမှာရေးသားတယ် ။
မြန်မာတွေအတွက်လည်း စုံစမ်းသင့်တယ် ။
သုံးသပ်ချက်တွေ ရေးသင့်တယ် ။
တရားစွဲမဲ့ သူများ ရှိလား ။
14 October 2014 · Edited ·
မြန်မာကောင်လေးတွေ အလွဲလွဲ အချော်ချော် နဲ့ 
တခုခုတော့ မှားနေတာ သေချာတယ် ။
ပေါက်ပြား နဲ့ထုရင် ။
သွေးတွေနဲ့ ခြေရာ ကျန်ရမယ် ။
ဒဏ်ရာက ရန်ဖြစ်ထားတာ ။
အရိုက်ခံရလို့လူးလှိမ့်တာ ။
မုဒိန်းကျင်ခံ ကောက်မလေး လက်ထဲမှာ
ဆံပင် အနီ ကျန်တယ် ဆိုတာ
တော်တော် ပြင်းထန်တဲ့ ရုန်းကန် တဲ့
မြေပြင် လက္ခာတွေ တခုမှ မရှိဖူး ။
ခြေရာကျန်တွေ နဲ့ လူတွေ တိုင်းတာ တွေ့ လိုက်တယ် ။
ပေါက်တူးနဲ့ပေါက်ရင် ခြေဖျားက
အားစိုက်ပြီး ဖနောင့်က ကြွတက်ရတယ် ။
ခြေဖျား ခွက်လေးတွေ အစီအရီ ကျန်ပြီး
ဂဏန်းလေးတွေ ရှိရမယ် ။
အခုတော့ ပြားလိုက် ကျန်တာ တွေ့ တော့ တခုခုဘဲ .
CSILA တင်လိုက်တဲ့ ပုံကို စစ်ဆေးကြည့်ရင်
လိပ်ကျွန်း သူဌေးသား နဲ့ရှေ့ နေ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ
မီဒီယာကို ကျောင်းတက်နေတယ်ဆိုတာ သက်သေပြတဲ့
CCTV က ပုံတွေ နဲ့ 
၁၄-၁၀-၂၀၁၄ မှာ CSILA တင်လိုက်တဲ့
CCTV ပုံကို စစ်ဆေးကြည့်ရင်
ဓါတ်လှေခါး ထဲကို ဝင်ပြီး စက္ကန့်၃၃ မှာ
ကျောင်းခန်းမ ထဲကို ရောက်နေပါတယ် ။
အဓိပ္ပါယ်ကတော့ လိပ်ကျွန်းသူဌေးသားနဲ့အဖွဲ့ က
ထိုင်းလူထုနဲ့ကမ္ဘာလူထုကို လိမ်နေတယ် ဆိုတာ ပြလိုက်တာပါ ။
ထိုင်းပုလိပ် ခွေးတွေလို ချီးစားနေတယ် ဆိုတာ သက်သေဘဲ ။
အနီးကပ် သေနပ်နဲ့ပစ်မှ ခေါင်းက အရိုးစ ထွက်မယ် ။
လက်တကမ်း အကွာ ဆိုရင်တောင်
ကျည်ဆံ လည်အားနဲ့ဖေါက်သွားတာဘဲ ရှိမယ် ။
— with Eve Say.
13 October 2014 · Edited ·
အသတ်ခံရသူ ဒေးဗစ် ဟန်နာ တို့ အုပ်စုထဲက
သူ ဘာမှ မသိနိုင်ဖူးလား ။
CSILA ဆိုတာ ဘယ်သူလဲလို့ 
ညီငယ်တယောက်က မေးလာပါတယ် ။
၂၄ ရက် ဖေဖေါ်ဝါရီလမှာ စတင်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ် ။
ပထမဦးဆုံး LIKE လုပ်သူ ၂၅ ယောက်ထဲ
https://www.facebook.com/profile.php… ဖြစ်ပါတယ် ။
မူလ စောစောပိုင်း အချိန်တွေတုံးက
အမေရိကန် သမ္မတ မိန့် ခွန်း
အရှေ့ အလည်ပိုင်း စစ်ပွဲ
ထိုင်းပုလိပ် မှားယွင်းပြီး ဖမ်းဆီးသူ လွတ်မြောက်လာတဲ့
သတင်းနဲ့ပြစ်မှု ဆိုင်ရာ လောကထဲ ဝင်လာပါတယ် ။
လိပ်ကျွန်း လူသတ်မှု မှာ လူ့ အခွင့်အရေး အရ
လူတိုင်းကို မျိုါ်းရီုးဗီဇ မစစ်ဆေးဖူး ဆိုတဲ့
ဗီဒီယို တင်ပြီး စတင် လေ့လာတာ တွေ့ ရပါတယ် ။
နောက်ပိုင်းမှာ သူရရှိထားတဲ့ တီဗီက ပြတာတွေကို
ကူးယူပြီး လူသတ်မှု ဘယ်က စဖြစ်တယ် ဆိုတာ ကို
တစိုက်မတ်မတ် ရေးလာခဲ့ပါတယ် ။
နောက်ဆုံးမှာ ထိုင်းပုလိပ်တွေ မှားနေတာတွေကို
တိတိကျကျ ထောက်ပြ ဝေဖန်ခဲ့လို့ 
ထိုင်းတီဗီကြီးတွေက သူ စဉ်းစားချက်တွေကို
အသိအမှတ်ပြုပြီး သတင်းတွေမှာ ထည့်သွင်း
ဖေါ်ပြလာတဲ့ အထိ အချိန်တို အတွင်း ကျော်ကြားခဲ့ပါတယ် ။
သူ့ ရဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကြောင့် ထိုင်းလူထုက
ကျွန်းပိုင် သူဌေးသား လို့ယူဆ နေကြတုံး
ထိုင်းပုလိပ်တွေက မြန်မာ ၂ ဦးကို ဖမ်းဆီးပြီး
တရားခံလို့ စွပ်စွဲ လိုက်ပါတယ် ။
အဲဒီ အချိန်ကစပြီး သူ့ ရဲ့ စဉ်းစားတွေးခေါ်နည်းတွေက
လူကြိုက်များလာပြီး အခု ဆိုရင်
သူ့ အကောင့် ကို လူ ၃သိန်းကျော် ကြိုက်တယ် ဆိုပြီး
နေ့ စဉ် သွားရောက် ကြည့်ရှု့နေကြပါတယ် ။
CSI LA က ( မတရားမှု ဆက်လက် လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ထိုင်းပုလိပ်တပ်ဖွဲ့ နဲ့ 
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကို စိန်ခေါ် လိုက်ပါပြီ )
We've asked for DNA and video evidence to prove the innocence you continue to claim. You refused. We will wait another 11 hours for evidence which you've promised.
we are curious as to what are foreign tourists' opinions about your hotel and other establishment. We are going to gauge that online, publicly and internationally
CSILA အုပ်စု မဟာမိတ်များ အနေနဲ့ကျွန်းသူဌေးသားကို DNA စစ်ဆေးခိုင်းရန်နှင့် မီဒီယာတီဗီများ တွက် တင်ပြခဲ့သော CCTV ကင်မရာမှဓါတ်ပုံအထောက်အထားများ ရှင်းလင်း တင်ပြရန် တောင်းဆိုခဲ့သည် ။ သင်တို့ အနေဖြင့် ပျက်ကွက်ခဲ့သည် ။ ကျွန်ုပ်တို့ အနေဖြင့် နောက်ထပ် နာရီ အနည်းငယ်သာ ဆက်လက် စောင့်ဆိုင်းတော့မည် ဖြစ်ပါသည် ။
ကျွန်ုပ်တို့စူးစမ်းသိချင် နေတဲ့ အချက်က
နိူင်ငံခြားသားတိုးရစ်များ က လိပ်ကျွန်းသူဌေးပိုင် ဟိုတယ်များနှင့်
အခြား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအပေါ် ဘယ်လို သဘောထားတယ် ဆိုတဲ့
စစ်တမ်းကောက်ယူဖို့အွန်လိုင်းပေါ်က စတင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီကိစ္စကို နိုင်ငံတကာမှ လူထု လူစု အသီးသီး ကို
အသိပေး လှုံဆော် ဖြန့် ဝေ သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
นมสดเเละทนายคุณนมสดคุณเหลืออเวลาอีก 11 ชม หรือ เที่ยงคืนวันนี้ของเมืองไทย โปรดนำภาพเคลื่อนไหวที่จากCCTV ของ หอพัก ร้านสะดวกซื้อ มหาลัยกรุงเทพ เเละ ผลการสอบในวันที่ 15 กันยา มาเป็นหลักฐาน
ถ้าคุณไม่ทำตามพวกเราจะเข้าไป ใส่ข้อความตาม เพจที่ให้คนเเสดงความคิดเห็นเช่น Trip Advisor รวมทั้ง Facebooา ด้วย
လိပ်ကျွန်း နဲ့စူရဌါနီက မြန်မာတွေ
မြန်မာ အဖွဲ့ အစည်းက လူကြီးတွေ ဟုတ်မဟုတ်
မည်သည့် အဖွဲ့ စည်းမှန်း မသိသူတွေ
ရည်ရွယ်ချက် ကောင်းမဲ့ အထားမရှိပါဖူး ။
သူတို့ မေးလာရင် ထိုင်းကိုရောက်တာ မကြာသေးဖူး ။
ပြန်ဆက်သွယ်ရမဲ့ ကဒ်ပြား (နန်းဘတ် )
တောင်းထားပြီး ဖေ့ဘုတ်မှာ ဖြစ်ဖြစ်
ကျွန်တော့ ဆီကို ဖြစ်ဖြစ် ပို့ ပေးပါ ။
11 October 2014 · Edited ·
ရှေ့ နေက သူ့ မှာ အပြစ်မရှိကြောင်း
မီဒီယာတွေကို သံသယ ဖြစ်ဖွယ်ရာ
ဓါတ်ပုံ အထောက်အထားများနဲ့ 
ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ရှင်းပေးခဲ့တယ် ။
ကျွန်းပိုင်ရှင် သူဌေးသား နားလည်မှုလွဲသွားတာ ဖြစ်မယ် ။
ဖေ့ဘုတ် က နာမည်ကို ပြောင်းပြီး အိုကေပြီ င်နေတယ် ။
ပရို ဖိုင်းက ပုံတွေ ကို ပြောင်းဖို့ မစဉ်းစားခဲ့ဖူး ။
တင်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေက နေ့ စွဲ နဲ့ 
နေရာ တွေ ဖေါ်ပြနေတာ
သတိမေ့သွားတယ် ထင်ပါတယ် ။
လူသတ်မှု ဖြစ်တဲ့ ညက အ
ထူးအစီအစဉ် လုပ်နေတဲ့ ပုံတွေကို
တင်ထားတာ မဖျက် ခဲ့ဖူး ။
မြန်မာအုပ်စု တွေ သိသွားတဲ့
ချက်ခြင်းသတင်းပေး လိုက်လို့ 
ချက်ခြင်း ဖျက်ချပေမဲ့ ။
ကျွန်တော့် တို့ ဆီမှာ
အင်တာဗျူးမှာပြောထားတဲ့ အတိုင်း
ဘန်ကောက်မှာ ရှိနေတယ် ဆိုတာ
ကျွန်းပိုင်ရှင် သူဌေးသား နဲ့ ရှေ့ နေ လိမ်တာပါ ။
ကူညီနေတဲ့ သူတွေ အတွက်
တရားရုံးမှာ အသုံးဝင်မှာပါ .။
လူသတ်မှု ဖြစ်တဲ့ နေ့ က
လိပ်ကျွန်းက သူဌေးသား ရှေ့ နေက
အထောက်အထားနဲ့ မီဒီယာမှာ ရှင်းခဲ့တဲ့
CCTV ကင်မရာမှ ဓါတ်ပုံများ အတု ဖြစ်နေလား
Sinceaphotoshop job withaGraphic
Story Tree Tuscan routine anyway.
It'saprofession that analyzes it ...
let's not focus on the person in the picture.
When it comes to image sharpness.
So what we are seeing is "the crooked" look at the numbers (used in)
1,2,3,4 and9are eccentric world it is not slick!
The number5(for points),
it is seen that the entrance emerges
if you look at the edge of the door will open whenaperson walks..
Though! I cut the red sticker
No.6(hand pointer) to do (get the wrong one) Well
No.7(for points) at
No. 15 .. numeric5tail emerges (in the circle),
which basically means I subconsciously copy.
No. 1 forward and 1 or type the number5over 8 existing
(No.5is greater than 1 and the tail appeared at number 5) and uneven !!
The No. 8 (hand pointer) to collect just not as hard as i
t is to catch the number 09 in the 06 Somerset saw it !!
And the number 10 (for the) foot off the ground
likeasleek giveaway (head) did not ....
Finally, in the gift ofagreat circle of yellow.
Greater contrast in the image,
the more apparent is the storyline feud with David !!!!
When we try to go see the calendar.
The model number on the day and time is
Monday at 1 or 8 months92014 at
06:16:40 (01 or 08 - 09 - 14 06:16:40).
မူလ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲက
Min Soe Naing သတိပေးသည် ။
ကျနော်တို့ ဗမာတွေ အယူမှားနေတာ ရှိတယ်။
ရခိုင်လေး ၂ ယောက်အမှုမှာ ဖိအားပေးရင် ထိုင်းအစိုးရက "လွှတ်" ပေးမယ် ထင်နေကြတယ်။
ကျနော် အကြိမ်ကြိမ်ပြောပြီးသားပါ။ ဒီအမှုဟာ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်လူဝင်မှု immigration ဆိုင်ရာ ၊ နိုင်ငံရေး political အုပ်ချုပ်ရေး၊ administration ဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေ Civil Law တွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ "သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရပေါ်လစီအပေါ်" မှီတည်နေတဲ့ အမှုတွေမှာ ပေါ်လစီအားနည်းမှုကို ထောက်ပြပြီး နိုင်ငံတကာဖိအား နဲ့ ပြောင်းလဲအောင် ဖိအားပေးလို့ရတယ်။
ရာဇဝတ်မှု Crime အမျိုးအစား - လူသတ်၊ လုယက်၊ ခိုးယူ၊ မုဒိန်း စတာတွေဟာ ( ထိုင်းမှာ သေဒဏ်ပေးပေမယ့် မြန်မာမှာ ထောင်ဒဏ်စသည် ) ပြစ်ဒဏ်ကွာခြားတာလွဲလို့ အားလုံးကို ပြစ်မှုသတ်မှတ်ချက်အတူတူပဲ။
ဒီတော့ ဖိအားနဲ့ "လွှတ်"ပေးလိမ့်မယ်လို့ စိတ်ကူးမယဉ်ကြပါနဲ့။
တရားရုံးမှာ ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး၊ ခုခံချေပရေးကို အာရုံစိုက်ပါ။
ခင်ဗျားတို့ ရေလိုက်လွဲရင် ရခိုင်လေး ၂ ယောက် သေလိမ့်မယ်။
ကျုပ်တို့ အားကိုးနိုင်တာ ဗြိတိန်၊ မြန်မာ ပါဝင်တဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး၊ ခုခံချေပရေး အဖွဲ့ပဲ။
ဦးသိန်းစိန်က ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့ လွှတ်ပေးမယ်ပြောတယ်။ ခုထိမလွှတ်သေးဘူး။
၁၅ ရက်နေ့ ရုံးတင်မယ်လို့ သတင်းတခုမှာ ဖတ်ရတယ်။
အဲဒီအဖွဲ့မှာ ထောက်လှမ်းရေး၊ မှုခင်း၊ ဥပဒေ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေ ပါဝင်ဖို့လိုပါတယ်။
မြန်မာတို့ရဲ့ အစွမ်းသတ္တိ မညံ့ကြောင်း ကမ္ဘာကို ပြသရတော့ပါမယ်။
အော်ဟစ်ဆဲဆိုနေတာ ဇာတိမာန် မဟုတ်ဘူး။ ဘာအကျိုးမှလဲ မရှိဘူး။
ဆူးကို အပ်နဲ့ ထွင်တတ်ဖို့လိုတယ်။ ပေါက်ဆိန်နဲ့ ပေါက်ချင်ရင် ထိုင်းရောက် မြန်မာရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့ ဘဝကို ငဲ့ပါ။
ကျနော်တို့အားလုံးက သတင်းအချက်အလက် အတိအကျ၊ အမှန်အကန် ကူညီ ပံ့ပိုးကြဖို့လိုပါတယ်
ထိုင်းနိုင်ငံ မှ မြန်မာပြည်သားများ အားလုံး
မြန်မာပြည်မှ မ်ြမာပြည်သားများ အားလုံး
နိုငငံတကာမှ မြန်မာပြည်သား အားလုံးကို
ထိုင်းနိုင်ငံ ပုလိပ်က အသိအမှတ်ပြု ရတဲ့
ဆက်လက် ကြိုးပန်းကြပါ ။
ထိုင်းနိုင်ငံထဲက မီဒီယာအချို့ က သတင်းတွေကို
ထိုင်းပုလိပ်တွေ လိုက်ပိတ်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်
အမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေကို
တဦးခြင်း အနေနဲ့သိမ်းထားစေလိုပါတယ် ။
10 October 2014 ·
မြန်မာရှေ့နေနဲ့ အဖွဲ့စီးတွေကို ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့သူက
ထိုင်းနိုင်ငံက TV3လိုင်းက ထောင်ထဲကကောင်တွေကိုသွားပြီး
အခုကြိုမသွားခဲ့ရင် ကောင်လေးတွေကိုထိုင်းရဲက ခြိမ်းခြောက်ပြီး သူ့တို့သတ်ပါတယ်ပြောခိုင်းလိုက်လို့
Htay Tint added4new photos.
ဟန်နာ မိဘ အသိုင်းအဝိုင်းက
မြေကြီးက လာတဲ့ဟန်နာ ရုပ် အလောင်းကို မြေကြီးထဲကို
ပြန်ပို့ တဲ့ အခန်းအနားပါ ။
ဟန်နာ ရဲ့ နောက်ဆုံး ခရီးမှာ
မင်္ဂလာဆောင် အခန်းအနား မြင်းများနဲ့ပို့ ဆောင်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ် ။
ငယ်ရွယ်သူ မိန်းကလေး တိရိစ္ဆာန် များကို ချစ်မြတ်နိူးစေရန် ဖြစ်ပါတယ် ။
(မုဒိန်းကျင့် အသတ်ခံပြီး တပတ်အတွင်း
ဟန်နာ ရဲ့ ကျန်ရစ်တဲ့ ရုပ်အလောင်းကို
အင်္ဂလန်နိုင်ငံကို ပြန်ပို့ ပေးခဲ့ပါတယ် ။
အင်္ဂလန်မှာ ၃ ပတ်ကြာ ထားပြီးမှ
မြေချ သဂြိုလ် တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဥရောပ မှာ လူသေရင် ၃ ရက် မျှသာ ထားရှိလေ့ ရှိပါတယ် ။
၃ ပတ်ထားနိုင်သူတွေ ဆိုတာ ငွေကြေး တတ်နိုင်သူတွေပါ ။ )
Miss Witheridge's family, pictured above,
had wanted to create an atmosphere similar to
a wedding and had asked for horses
because of the young woman's love for the animals
Read more: http://www.dailymail.co.uk/…/family-friends-british-tourist….
10 October 2014 · Edited ·
-တနေ့ တခြား ဖြစ်လာပါတယ် ။
-အမှုနဲ့ပါတ်သက်ပြီး
-သံသယ တွေကို တခုခြင်း ထောက်ပြနေတဲ့
-CSI LA ဖေ့ဘုတ် ပိုင်ရှင်ကို
-ထိုင်းနိုင်ငံ FM ရေဒီယိုမှ
-သတိပေး ရတဲ့ အထိ ဖြစ်လာနေပါတယ် ။
-ဒီနေ့FM ရေဒီယိုက တဆင့်
- မြန်မာ ထိုင်း အင်္ဂလိပ် သုံးနိုင်ငံ
-မကျေနပ်မှုတွေ ဖြစ်လာရင် CSI LA pageက
-ရဲချုပ်နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ သတင်း အသေးစိတ်
-ဆက်တင်ပေးပါ့မယ် ။ ။
— with Ko Zaw and2others.
ထိုင်းလူမျိုးသိအောင် ရှယ်ပေးကြပါ ။
သောက်သုံးမကျတဲ့ ထိုင်းပုလိပ်တအုပ် နဲ့ 
ထိုင်း မာဖီးယား တစု အရေးကနေပြီး
ပိုမိုကျယ်ပြန့် စေမဲ့ ပြသနာတွေ မဖြစ်စေဖို့ 
Posted by Mr Htay Tint at 2:13 AM
လိပ်ကျွန်းဓါတ်ပုံ KOH TAO case' Photo part 1